A na-ekwu na e jidere ya oge ọ na-achọ ụzọ ọ ga-esi aga mba Somali maka isonyere ndị agha isi ekwe ọnwụ al-Shabab nke mba Somali. A gbaara ya ụgbọ nwa mkpị na Kenya, ka e kpechara ya ikpe.
N’izu ụka gara aga, Michael na onye ogbo ya buru agha iyi egwu na Woolwich. Ha jiri ụgbọala kụtuo otu onye soja mba Britain na-agara onwe ya. Kama ha ga-enyere onye amị ahụ na-anwụ anwụ aka, Michael na onye ogbo ya mịpụtara mma were gbukasịa nwoke onye soja ahụ. Ọ nwụrụ ebe ahụ n’ike, n’etiti okporo ụzọ.
Ndị uwe ojii rutere ebe ahụ ka o mechara ihe dịka nkeji 20. Ha gbara Michael na di nna ya egbe, tupu e jido ha.
Taa bụ ụka, ndị nwe onye soja ahụ gbakọtara ebe ihe a mere maka ịkwanyere ya ugwu ịkpazụ.